यो कस्तो वेदना ? ‘मर्नुअघि घर जान पाए हुन्थ्यो’ – Etajakhabar
यो कस्तो वेदना ? ‘मर्नुअघि घर जान पाए हुन्थ्यो’
ललितपुर, १९ पुस । जस्ताले बेरबार बनाएको छाप्रोको अघिल्तिर थोत्रो सुकुलमा घाम तापिरहेकी थिइन् ६५ वर्षीया टरमैयाँ महर्जन । छेउमा थिए, ७५ बर्से पति माइलाकाजी । माइलाकाजी पत्नीको साथ एकैछिन पनि छाड्दैनन् किनकि ०७२ सालको भूकम्पपछि टरमैयाँको होस राम्ररी खुलेको छैन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यही बेलादेखि उनी पक्षघातले थलिएकी छन् । ‘उनी न बोल्न सक्छिन् न त हिँडडुल गर्नै ! त्यसैले एकछिन पनि छाड्दिनँ’, पत्नीको छेउमा बसिरहेका माइलाकाजीले भने ।
टहरोमा बस्दै आएका स्थानीयले भूकम्पका भग्नावशेष पन्छाइदिन पटक-पटक वडा कार्यालयमा आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म २०÷२२ घरबाहेक बाँकीको हटाइएको छैन । एउटै घरको माटो पन्छाउन २५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १९, २०७४ समय: ८:२५:५२